Audio Video Interleave format, aka AVI, waa wax soo saarka video abuuray by Microsoft ah. Waa barnaamij ka qabtaa audio iyo video file isku mid ah si maqal ah had iyo jeer waa in synch. Waxaa jira boqolaal ciyaaryahan video halkaas, laakiin qaarkood ka fiican yihiin kuwa kale. Bal aynu eegno ciyaartoyda ugu sareysa toban AVI halkaas.
Award guuleystay, super caanka ah (isticmaalaan tobanaan malaayiin dad ah), iyo fududahay in la isticmaalo, VLC ka heli laftiisa sare ee liiska badan. Waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "waa in uu leeyahay", tan iyo markii ay ka ciyaari karaan noocyo kala duwan oo ah qaabab video, iyo software il furan, taasoo la micno ah waa gebi ahaanba bilaash ah. Its interface waa uncluttered, iyo halka qaar u arkaan in lagu caajiso, waxa ay sidoo kale ka dhigan tahay waa mid aad u fudud marka hore dadka isticmaala waqtiga si aad u bilowdo. Haddii aad rabto inaad aragto Blu-Rays, DVD-joogto ah, ama videos kale HD, VLC sidaas samayn kara.
Kuwa lahaa combiyuutarka ee 90s waxay soo xusuusan doonaa Player Real. Tani ma aha Player Real hooyadiin, in kastoo. Ka ciyaari kara toban kun oo ah qaabab, iyo video ka websites ahayn YouTube qabsaday, taas ciyaaryahan xor ah waa xoog badan yahay fududahay in la isticmaalo, oo ka soo jeeda jilicsan cirro oo aan ka jeedin. Waxa kale oo uu leeyahay feature u ogolaanaya in aad kala soo bixi videos Facebook saaxiibadaa ". Ma ahan super xiiso leh si loo eego oo la isticmaalo, laakiin waxa aanu u baahan tahay in. Wixii cusub OSS, ay ka mid yihiin Windows 7 iyo 8, sidoo kale Android iyo macruufka, waxa aad heli kartaa feature daruurtii, sidoo kale.
Barnaamijkan freeware yimaado ka buuxaan waxyaabo badan oo ah codecs dhisay software ah. Haddii ay dhacdo in ay la kulmaan video ah oo u baahan in codec ah u ma laha, waxay baadhaa internet-ka waxa ay u si toos ah. Interface waxay leedahay noocyo kala duwan oo dhar harag ah u isticmaali karaan, iyo waxa ay leedahay noocyo kala duwan oo tuuryo dhisay. Waxa aanu, si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin awood ay ku sameeyaan screencaps ama dib u bilaabi loo maqli karo. Waxaa xitaa xamili karaan qaab Blu-Ray ee MKV, inkastoo mararka qaar, subtitles si sax ah uma muujin doonaa. Update A dhawaan soo hagaagtay awood u leeyahay inuu ciyaaro files AVI weyn (kuwa ka badan 2GB).
Sida magacaba ka muuqata, tani waa video ciyaaryahan dhameystiran oo wada qaadan kara tiro badan oo ah qaabab, inkastoo aysan awood u leeyihiin in ay la tacaalaan subtitles ah. Ma jiraan wax barbareysay barnaamijka midkood. Way fududahay in la isticmaalo iyo sahlan si aad u bilowdo. Gacanta ku Ciyaaryahanka yihiin ilaa dhinaca reer video ah, sidaa darteed uma baahnid in aad walwasho ku saabsan inay heli jidka aad video loo maqli karo. Qaar ka mid ah dadka isticmaala helay in marka ay ka horimaanayaan video ah oo aan ciyaari doonaa VLC, waxa aanu ciyaaro TVP. Ma ahan interface ugu midabo, laakiin waxa ay si fiican u shaqaynayaan.
Ciyaaryahanka Tani soo qaadan oo aan wax badan oo meel on your computer, iyo interface waa quruxsan. Waxaa ka ciyaari kara ku dhowaad kasta video ama qaab maqal ah, waana u fudud si aad u bilowdo oo ay isticmaalaan. Dhisna software yihiin ku dhowaad 200 oo codecs, oo si toos ah downloads subtitles on filimada af shisheeye. Waxa aanu haysan interfaces customizable harko kala duwan, oo aad sameyn karto oo u saftay shaashadda. Ciyaaryahanka radio ayaa iman mayso wax saldhigyada preloaded, la siiyo fursad ay ku shuban kuu gaar ah oo aan u leeyihiin in ay tirtirto channels aadan rabin in aad. Videos ka sokow, waxa ay ka ciyaari karaan DVDs iyo VCDs, oo qulquli karaan music.
Ma u baahan tahay ciyaaryahan oo wada qaadan kara tiro ka mid ah DVD gobollada? Waxaad ka helnay WinX. Iyadoo interface ma aha snazzy, waxay leeyihiin awood video loo maqli karo oo tayo sare leh. Waxa kale oo ay taageertaa tiro badan oo ah qaabab video, oo lagu daray waxaad bedeli kartaa luqadaha, samayn saftay screen, la abuuro playlists, iyo bookmark aad movie. Waxa ay leeyihiin qaar ka mid ah xad configuring marka aad u soo dajiyo, iyo haddii aad caawinaad u baahan tahay, ma jiraan wax gargaar file. Waxa kale oo aad toolbar ah in uu yahay joogto ah marka aad daawato videos in shaashad buuxda.
Ciyaaryahanka Tani hayaa tasoo ah! Waxaad ciyaari karaa noocyo kala duwan oo maqal ah iyo video qaabab, iyo haddii ay u baahan codec ah, waxaa u downloads aad u. Interface baa laga beddeli karaa noocyo kala duwan oo dhar harag ah. Waxaad bookmark kartaa videos, qaado saftay screen, aragtida subtitles, iyo boodi cutubka ah. Kontoroolha waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo keyboard ama jiirka, sida la qabsado aad mugga boggan wheel jiirka kor iyo hoos. Tusaha user waa laga heli karaa internetka.
Ciyaaryahanka video Tani ma isticmaali codecs. Waa maxay? Waxaad xaq u maqlay - codecs lahayn. Waxaa ciyaara videos iyaga oo aan. Waxay isticmaalaan wax lagu magacaabo engine MPlayer lahayd. Khasaare ah in tani ay tahay ciyaaryahanka ugu fiican uma yeelin la DRM ilaaliyo filimada. Waxaa kor u dhamaado ciyaaro clips laakiin ma filimka buuxa. Waxaa kuu fasaxayaa in aad dib u bilaabi play meesha aad iska daayeen, oo kuu ogolaanaya in aad astaysto subtitles aad. Waad beddeli kartaa font size iyo qoraalka si ay u fududaato in la akhriyo. Waxa kale oo ay xamili karaan geeyo internet video, oo lagu daray bedeli xawaaraha taas oo video ah oo u ciyaara daafaca.
Barnaamijkan oo lacag la'aan ah ku samayn karin loo maqli karo video iyo sidoo kale geeyo video. Waxa aanu soo qaadan oo aan qolka badan on your computer, taas oo lagu daray tirsa. Interface waa mid fudud, laakiin waxa aad u astaysto si kastaba ha ahaatee aad rabto, mar kasta oo aad rabto. Haddii aad la ciyaareyso files audio, waxaa dajiyaan karaa farshaxanka album aad u, iyo feature daruurtii kuu ogolaanayaa inaad la wadaag saaxiibadaada faylasha aad. Haddii aad jeclaan filimada 3D, KMPlayer iyaga xamili karaan, sidoo kale. Fursadaha Radidiyaha ha waxaad ku dari filtarrada, samayn saftay screen, iyo nadiifinta haydh video files.
Tani ma aha oo kaliya ciyaaryahan ka qabtaa files MKV, laakiin waxa ay sidoo kale qaban karaa MOV, AVI, MPEG, .mp3, iyo .mp4. Way fududahay in la isticmaalo, waxa wanaagsan, sababtoo ah ma jirto wax kaalmo menu. Waa freeware, waxayna u muuqataa in sidaas oo kale ah. Interface waa aasaasiga ah, muuqan menu loo maqli erayo ku yaal iyo sidoo kale markii bar ah in aad isticmaali karto in uu horay ama u socdeen simbiriirixan ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u badalo xawaaraha video loo maqli karo, laakiin waxa aanu ma ah bar barbaraha audio ama cilado video. Laakiin, haddii aad raadinayso ciyaaryahan video in xamili karaan Blu-Ray oo kale qaabab video, tani waa dhan aad u baahan tahay.
Doorashooyin badan! Nasiib wanaag, tan iyo tiro ka mid ah barnaamijyada ay yihiin freeware, waxaad iyaga ka soo qaato kartaa wadid tijaabo ah oo la arko sida aad u jeceshahay, ka dibna kaliya kuwa aad rabto. Files Your AVI waa in mid ka mid ah qaabab ugu badan, si kasta oo ka mid ah ciyaartoyda, kuwaas oo awoodi doona inuu ku maareeyo. Your tartan waa in mid ka mid ah in muuqataa oo kaliya xaq u helidda.
> Resource > DVD > Top Ten Best AVI DVD Players